dimanche, 10 octobre 2021 16:50
Eto isika dia manandratra ny nofin'izao tontolo izao
CUA Antananarivo : "Eto isika dia manandratra ny nofin'izao tontolo izao"
Maroantsetra : Haniry bozaka tsy mety vita ireo lalana nampanantenaina
Nampanantena lalana rarivato ny Governoran'ny Faritra Analanjirofo, asa tokony novitaina roa volana.
Nampanantena ihany koa ny minisitra Hajo Andrianainarivelo fa hanamboatra lalana ao Maroantsetra tampon-tanana, amin'ny volan'ny Tahiry fikojana ny lalana (FER).
Orinasa an'ny Senatera iray amperinasa no nahazo ny tsenan'asa ho an'ity farany. Nisy fandravana tranon'olontsotra.
Zara fa nanomboka ny asa dia nikatso teo, efa amam-bolana maro izao. Efa haniry bozaka aza ny sasany, ary vao maika feno lavadavaka.
dimanche, 10 octobre 2021 13:43
Fianarantsoa : Hanorenana "Coliseum"
Hisitraka tetikasa "Pôle urbain" ny tanànan'i Fianarantsoa, renivohitry ny Faritra Matsiatra Ambony.
Hisy fanorenana lalan-dehibe na "Avenue", toeram-pivarotana isan-karazany, ary kianja "Coliseum" ao Ambatomena, araka ny fampanantenana nataon'ny Filoha Andry Rajoelina tamin'ny mponin'i Fianarantsoa.
Hisy toerana fitsangatsanganana toy ny zaridaina lehibe sy ny “esplanade” ao amin'io toerana io. Hapetraka eo ihany koa ny biraom-panjakana isan-tsokajiny sy izay rantsa-mangaikan'ny Ministera rehetra.
dimanche, 10 octobre 2021 13:38
Fianarantsoa : Vita ny Fonjabe vaovao mahazaka voafonja 1 000
Tontosa ny Sabotsy 9 Oktobra 2021 teto amin’ny Fokontany Volamena, Kaominina Ambalakely, eto Fianarantsoa ny fanolorana ny Fonjabe vaovao sy manara-penitra, izay mahazaka hatramin’ny voafonja 1 000 isa.
Nanolotra fiara iray avy amin’ny tenany manokana mba hitaterana ireo voafonja ihany koa ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Tanjona ny haha-toerana fanarenana sy fanabeazana ary fanajana ny zon’olombelona ny fonja, fa tsy ho toerana fanasaziana fotsiny ihany, satria hisy amin’izy ireo no hiverina eny anivon’ny fiaraha-monina rehefa vita sazy, na koa voatsara. Na dia mifonja ary izy ireo dia manana zo, hoy ny Filohan’ny Repobika.